Category: Cunooyinka u fiican ramadaanka
Haddana waxaa marar badan oo kale dhacda in la arko dad Ramadaanka ku sii naxaa, halkii laga filayey in miisaankoodu hoos u dhaco. Qormadan oo uu Geeska Afrika ka soo xigtay shabakadda Al-Carabiya waxa ay sheegaysaa dhowr arrimood oo sabab u ah in miisaanku uu qofka ku kordho xilliga ramadaanka, waxa aan ugu horreeya uguna muhiimsan dadka oo xilligan oo kale aan isku mashquulin in ay raacaan nidaam cunto qaadasho oo badqaba. Sababaha kale ee bisha Ramadaan keeni kara in miisaanka qofku kordho waxaa ka mid ah:.
Qofka oo cunto badan cuna inta u dhexeysa afurka iyo suxuurtu waxa ay keentaa caajis iyo wahsi badan oo qofka ku dhaca, waxa aanay bilow u noqotaa miisaanka qofka oo aad u kordha. Cuntooyinka dufanka badan lagu shiilo sida saambuusaha, kabaabka, quraacyada iwm ayaa ay khubaradu sheegeen in ay ka mid yihiin sababaha miisaanka qofka kordhiya xilliga soonka. Caloosha oo aan cuntada loo diyaarin, maadaama oo ay muddo dheer oo ka badan 12 saac cuntada ka maqnayd. Marka uu qofku intaas cuno waxaa fiican in uu cuntada joojiyo muddo 10 illaa 20 daqiiqo ah, ka dib uu markaas bilaabo cunista cuntada rasmiga ah ee u qorshaysan.
Cuntada kadib oo toos loo seexda, ayaa iyaduna leh khatar ah in qofka uu miisaan dheeraad ahi fuulo bisha soonka. Waxa ay khubaradu ku talinayaan in aanu qofku isku badin afurka, in cashada kadib uu lugeeyo illaa 30 daqiiqo maalin kasta, iyo in uu ku dadaalo in uu macmacaanka iska daayo oo halkooda uu geliyo khudrado, si aanu miisaankiisu u kordhin.
Waxay aaminsanyihiin dad badani in dumarku xagga musuqa kaga yaryihiin ragga; waxay aaminsanyihiin in dumarku …. Your email address will not be published. Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.Kalsoonida nafta waa rumaysnaanta aad aaminsan tahay inaad wax u qaban karto si sax ah ama aad xalaad ula tacaali karto si sax ah.
Haddii aad bilaa kalsooni tahay xaqiiqo ahaan waxaad lumin doontaa ama dayici doontaa fursado badan oo aad heli karto sababtoo ah waxaad ka baqan doontaa inaad ku dhacdo wax aanad hubin inaad samayn karto iyo inkale. Kalsoonida naftu weligeed lama dhaxlo waa wax la barto, marnaba ha is oran inaad kalsooni darrada aad ka dhaxashay waalidkaa.
FARIIMAHA CAAFIMAADKA – AAD MUHIIM U AH!
Mar wey fiicnaataa marna way xumaataa iyadoo marba ku xiran xaalada iyo waayaha aad ku sugan tahay nolosha. Haddii aynu ogaanay waxa ay kalsoonida naftu tahay, halkay kasoo jeedo iyo xaqiiqooyin ku saabsan iyada, aynu ugalno 9 tallaabo oo si cajiib ah ugu kordhin karto kalsoonida aad ka qabto naftaada. Sida aad naftaada ula hadashaa islamarkaana aad u malaysa awaxay saamayn aad u balaadhan ku leedahay kalsoonida naftaada.
Haddii aad naftaada ugu sheekayso inaanad fiicneyn islamarkaana aad hoos u dhigto oo aad liido waxaa hubaal ah inaad yeelan doonto kalsooni aad u hoosaysa oo aad aamini doonto hadalkaaga.
Si aad kalsoonida naftaada sare ugu qaado ka fogow inaad naftaada kula hadasho hadallo taban oo negative ah. Badanaa dhoola caddee, qosol, kuna hareeree naftaada dad faraxsan islamarkaana positive ah.
Taasi waxay kuu saamaxaysaa in dareenkaagu ka wacnaado sidii hore, islamarkaana dadka aad la joogto waxay xiiseyn doonaan la joogitaankaaga iyo wehelkaaga. Dadka badankii waxay sameeyaan caado xun oo ah inay barbardhigaan naftooda dadka kale iyagoo ka eegaya dhinacyo badan sida waxa ay haystaan, hantidooda, quruxdooda, farxadda ay ku nool yihiin, nolol maalmeedkooda iyo qaar kaloo badan, Dhibaatada ay arrintani leedahay ayaa ah in mid kastoo ka mid ah saaxiibadaa ama qoyskaaga ama dadka aad taqaanno waxay leeyihiin wax u gaar ah oo aanad lahayn, haddii aad joogteyso inaad barbardhigto qof kastoo aad la kulanto waxaa qiimo tirmi doonta naftaada sababi karta in kalsoonida naftaadu ay dhulka gasho.
Hadaba Si aad u joojiso is-barbardhigaan xun samee arrimahaan:. Tani waxay u muuqataa wax iska cad balse waxaa cajiib ah si maydhashada, xiirashada iyo labiska fiicani ay saameeyaan kordhinta kalsoonida naftaada iyo sawirka aad ka haysato naftaada. Waxaad kasoo qaadaa in aanad ku kalsoonayn awoodda aad u leedahay ciyaaridda nooc ka mid ah sports-ka, sida ugu fiican ee aad ku baran kartaa waa inaad maalin walba samaysaa tababar oo aad ku celceliso illaa aad ka baranayso sida saxda ah ee loo ciyaaro, dhamaan xirfadaha kalena waa sidaan oo kale.
Haddii guriga fadhido un wax kasii daro mooye waxba hagaagi maayaan inaad xarkaad iyo ficil samaysaa waxay sare u qaadaa kalsoonida aad ka qabto naftaada. Furaha ugu muhiimsan ee lagu Gaadho guushu waa kalsoonida nafta, furaha ugu muhiimsan ee lagu helo kalsoonida naftuna waa diyaar gorowga. Aad bey u adag tahay inaad ku kalsoonaato naftaada aad aaminsan tahay inaad shay si fiican u qaban karin. Ka fikir iminka Imxtixaan lagaa qaadayo, Haddii aanad wax akhris badan sii samayn, kalsooni badan ka haysan meysid awoodada aad imtixaanka uga shaqayn karto imtixaankaa si fiican balse haddii aad akhrido oo u diyaar garowdo waxaad yeelanaysaa kalsooni aad u badan.
Hadaba iminka ugu fikir noloshaada inay imtixaan aad gelayso oo kale, diyaarina naftaada. Waa wax aad fudud lagana yaabo inaad la yaabto balse waxay saameyn aad u weyn ku leedahay sida dadku kuu arkaan, dadka awoodda leh islamarkaanaa wax xukumaa si tartiib ah ayay u hadlaan.
Tani waxay ku tusaysaa kalsooni, qofka aaminsan in aanu qalmin in la dhegeysto hore ayuu hadalka u dedejiyaa sababtoo ah iskuma kalsoona. Isku day inaad samayso sidaa dhowr jeeer, waxaad dareemi doontaa kalsooni aad u badan, dabcan haku sii talax tagin laakiin ka fogow inaad si degdeg ah u hadasho.
Dadku badanaa waxay dejiyaan hadafyo aan la gaadhi karin markay ku fashilmaanna way niyad jabaan. Xagga aad taas ka samaynayso dajiso hadafyo yar-yar oo aad gaadhi karto islamarkaana ku guulayso.Nooca siilka waafiga leh ayaad tahay.
Wax Badan Ka Ogow…! Borotiinnada laga helo cuntooyinka ay kamidka yihiin Hilibka cad sida Kalluunka iyo Digaagga iyo weliba Caanaha iyo Farmaajada cadi waxa ay sameeyaan hormoonno kordhiya kacsiga iyo rabitaanka ragga ee ku wajahan dumarka inay la sameyaan ciyaar macaan, Kacsiga Siilka - ehbz. Gabdhaha qaar ayaa jecel ninka Gabdaha guska weyn jecel Ver perfiles de personas llamadas Gabadha Guska Jecel. Boorashku waa cuntooyinka ganka badan leh, sida sahalka ahna u milma.
Facebook gives people the power to share and makes the world Daawo Cuntooyinka kiciya Kacsiga mise Rabitaanka Galmada - Duration: Haddiise midkood howshiisii gudan waayo, taasi oo ku imaan karta aqoon-darri ama awood-darri ciniinnimo amaba iimaan-darri, qoysku waxa uu Naagaha ugu kacsiga badan waa kuwee.
Cuntooyinka kacsiga badan
Kacsiga Badan Ee Raga Iyo Dumarka Maxa Lagu Daweeya Wax Badan Ka Ogow Borotiinnada laga helo cuntooyinka ay kamidka yihiin Hilibka cad sida Kalluunka iyo Digaagga iyo weliba Caanaha iyo Farmaajada cadi waxa ay sameeyaan hormoonno kordhiya kacsiga iyo rabitaanka ragga ee ku wajahan dumarka inay la sameyaan ciyaar macaan.
Kacsiga siilka Reality juvenil de entretenimiento. Ka fogow cuntooyinka basbaaska leh, cunto aashito ku badan tahay sida bambeelmo, ama wixii cunto ah ee calooshaada dhibaya. Qaasatan waxa uu kacsiga badan dhib weyn ku hayaa ragga iyo dumarka doobka ah. Anigu shakhsi Kacsiga guska ninka Kacsiga guska ninka Guska raaxada badan Weliggaa ma maqashay qof ay daawanayaan malaayin qof xilli uu cunteynayo, waxaa uu qofka soo galaya muuqaal toos ah xilli ay hortaallo cunto badan, waxay dhaqan u noqotay dad badan oo ku nool Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in 30 daqiiqo oo socod ah ay kala bar hoos u dhigi karto qatarta kacsi la'aanta.
Kacsiga badan waxa uu saameyn ku yeelan karaa nolol maalmeedkaaga iyo xiriirkaaga. Bisha Ramadaanka dad aad u badan oo awooda dhaqaale ahaan ayaa jecel in ay ku afuraan. Xanjada kacsiga ama daawada kacsiga haweenka oo ka sameysan maadadan aan kasoo hadalnay aad bay ugu faafsan tahay dalalka qaarkooda, qaarna way ka mamnuuceen in la iibiyo ama la keeno. Y: Cuntooyinka kacsiga badan Borotiinnada laga helo cuntooyinka ay kamidka yihiin Hilibka cad sida Kalluunka iyo Digaagga iyo weliba Caanaha iyo Farmaajada cadi waxa ay sameeyaan hormoonno Daweynta dabiiciga ee kacsi la'aanta!!
Beans ka cad 5. Naagaha qosolka badan sida loo waso naagaha aan dareemin kacsiga waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan hilibka duban oo macaanka badan oo si fiican loo cuni karo, sidoo kale hilibkaas jirka ayuu buuriyaa, waa lagu buurtaa waa lagu naaxaa, cuntada lagu naxo waa cuntada si fiican u habysan nafaqo badan leh.
Kacsiga Badan Ee Raga Iyo Dumarka Maxa Lagu Daweeya Wax Badan Ka Ogow Borotiinnada laga helo cuntooyinka ay kamidka yihiin Hilibka cad sida Kalluunka iyo Digaagga iyo weliba Caanaha iyo Farmaajada cadi waxa ay sameeyaan hormoonno kordhiya kacsiga iyo rabitaanka ragga ee ku wajahan dumarka inay la sameyaan ciyaar macaan, cuntooyinka kacsiga laga qaado Sirta Noloshaada La wadaag qof walba Si Cunto caafimaad leh loo helo Cunto Muhiim kuu ah Cunto nafaqo leh oo isku dheeli tiran ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee u baahanyahay ilmaha soo koraya.
Qamadida habeenkii hadaad heli karto casho ahaan 2.Calool istaagga iyo mararka qaarkood nafaqadarradu waxa ay ka mid yihiin xaaladaha uu qofka waayeelka ahi kala kulmo soonka. Nidaam cunto oo caafimaadka u fiicani waa tallaabooyinka ugu horreeya ee uu qofku ku wanaajin karo xaaladdiisa caafimaad. Taasina waxa ay daciifisaa awoodda uu jidhku u yeelanayo in uu iska difaaco xaaladaha caafimaad darro ee dadka waayeelka ah aad ugu bata xilliga soonka.
Xaaladahaas oo ay ka mid yihiin; xanuunka dila unugyada maskaxda ee Alzheimer ka, wadne wareenka, dhiigfuranka maskaxda iyo faaligga iyo lafo burburka oo dhammaantoodba la ogyahay in sababaha ay ku yimaaddaan ay nafaqo xumadu ka mid tahay. Qormadan waxa aynu ku eegaynaa cuntooyinka caafimaad ahaan lagula talinayo qofka waayeelka ah ee soomaya, si uu xaaladahaas uga badbaado.
Tufaaxa: Waa il fiican oo laga heli karo Bootaasiyamta, lidka mariidka, Faytamiin Siiga muhiimka u ah ka hortagga kaarka iyo nabarowga. Waxa ay ka hortagtaa calool istaagga. Xabbad keliya oo uu qofku cuno ayaana ku filan in heerka sonkorta dhiiggu uu noqdo mid xasiloon, isaga oo sida oo kalana yareeya kalastaroolka aan fiicnayn.
Khudradda cagaaran iyo caleenta: Qofka waayeelka ah waa in aad loo siiyaa khudradda gaar ahaan noocyadeeda caleenta ah, oo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen in ay ka hortag u noqon karto cudurka dila unugyada maskada ee Alzheimer ka. Cilmibaadhis cusub oo natiijadeeda lagu faafiyey majaladda Annals of Neurology ayaa sheegtay in uu xidhiihd ka dhexeeyo hoos u dhaca khudradda cagaaran ee uu qofku cunayo, sida koostada iyo kaabashka iyo hoos u dhaca ku yimaadda awoodda garasho ee maskaxda qofku marka uu weynaado.
Kalluunka : Kalluunka noocyadiisa ay ka mid yihiin Solomonka, Tuunaha iyo Sardiinigu waxa ay hodan ku yihiin asiidhka duxda leh ee Omega3 oo lagama maarmaan u ah caafimaadka wadnaha. Waxaa iyaguna la mid ah dhinaca Omega cuntooyinka ay ka mid yihiin Faasuuliyaha, saliibka Qoondarka iyo saliidaha caafimaadka u fiican oo dhammaantood kalluunka beddel u noqon kara, dhinaca Omega3 marka laga hadlayo.
Sida oo kale Beedku waxa uu ka mid yaha yilaha ugu muiimsan jidhku ka helo faytamiinnada, barootiinnada, asiidhada Folic iyo macdanaha kala duwan ee ay ka mid yihiin Selenium, Phosphorus iyo Calcium. Bunka : Bunku qofka weyn la siiyo xilliga soonku waxa uu ak fogeynayaa xanuunka Alzheimer ka, xanuunnada wadnaha iyo habdhiska neefshida ku dhaca, faaligga iyo dhiigfuranka maskaxda iyo macaanka.
Waxaa xusid mudan in bunka badani aanu guud ahaan u fiicnayn caafimaadka, gaar ahaanan dadka waaweyn oo ay tahay in ay ka taxaddaraan. Caanaha : Caanaha iyo cuntooyinka laga soo dheegaa waxa ay ka mid yihiin cuntooyinka u fiican dheefshiidka ee sida gaarka ah muhiimka u ah xilliga soonka.
Waxaa ku badan barootiinta, waxa aana ku yar macaanka, sida oo kale waxa uu jidhku ka helaa Kalshiyaamta lagama maarmaanka u ah caafimaadka lafaha. Qofka weyn waxaa u fiican in uu inta soonka maalintii saddex jeer cabbo caano aan dufanku ku badnayn.
Bullying in schools: Fuquuqa iyo hiifka ilmuhu kala kulmo ardayda kale ee dugsiga waxay khatar …. Your email address will not be published. Cuntooyinka xilliga ramadaanka ee u fiican dadka waayeelka ah Calool istaagga iyo mararka qaarkood nafaqadarradu waxa ay ka mid yihiin xaaladaha uu qofka waayeelka ahi kala kulmo soonka.
Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.Sidaas darteed qoraalkeenan ayaanu ku eegi doonaa cuntooyinka waxtarka u leh caafimaadka maskaxdeena. Waxay dhamaanteen ognahay in cunista cunto caafimaad qabtaa ay muhiim u tahay caafimaadkeena muuqaaleed. Si sidaa lamid ah ayay caafimaadka maskaxdenana muhiim ugu tahay. Maskaxdu waxay kaantaroosha dhamaan fikirada, dhaqdhaqaaqa iyo dareenka. Sidoo kale maskaxdu waxay maamushaa shaqooyinka xubnaha ee jidhka iyadoon wax nasasho ah qaadanayn.
Si ay maskaxdu si joogto ah ugu shaqayso islamarkaana ay xaaladeedu u noqoto mid fiican waxay ku xidhantahay islamarkaana ay ku tamarisaa nafaqooyinka muhiimka ee ay sida joogtada ah uga hesho cuntada aynu cuno, sonkorta dhiiga iyo hawada oxygenta ee aynu neefsano. Haddii aad cunto cuno si fiican iskugu dheelitiran, waxaad si fudud u siin kartaa maskaxdaada dhamaan nafaqooyinka daruriga ah ee ay u baahan tahay si ay maskaxdaadu u horumarto, Sidoo kalena aad uga hortagto cudurada maskaxda sida cudurka alsheimers disease ama dhimirka beelida, iyo cuduro kaloo badan.
Hadaba Cunooyinka u Fiican fayo-qabka, xusuusta iyo awooda maskaxdeena ayaa u dhigan sidan hoos ku xusan:. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Notify me of follow-up comments by email.
Notify me of new posts by email. Saturday, October 10, Badhtama Media Group. Arimaha Bulshada. Share on Facebook. Maxaa Uga Meel Yaal Somaliland? Please enter your comment! Please enter your name here.
You have entered an incorrect email address! Latest News. February 26, February 25, February 24, Hargeysa Geeska - Calool istaagga iyo mararka qaarkood nafaqadarradu waxa ay ka mid yihiin xaaladaha uu qofka waayeelka ahi kala kulmo soonka. Nidaam cunto oo caafimaadka u fiicani waa tallaabooyinka ugu horreeya ee uu qofku ku wanaajin karo xaaladdiisa caafimaad.
Taasina waxa ay daciifisaa awoodda uu jidhku u yeelanayo in uu iska difaaco xaaladaha caafimaad darro ee dadka waayeelka ah aad ugu bata xilliga soonka. Xaaladahaas oo ay ka mid yihiin; xanuunka dila unugyada maskaxda ee Alzheimer ka, wadne wareenka, dhiigfuranka maskaxda iyo faaligga iyo lafo burburka oo dhammaantoodba la ogyahay in sababaha ay ku yimaaddaan ay nafaqo xumadu ka mid tahay.
Qormadan waxa aynu ku eegaynaa cuntooyinka caafimaad ahaan lagula talinayo qofka waayeelka ah ee soomaya, si uu xaaladahaas uga badbaado. Tufaaxa: Waa il fiican oo laga heli karo Bootaasiyamta, lidka mariidka, Faytamiin Siiga muhiimka u ah ka hortagga kaarka iyo nabarowga. Waxa ay ka hortagtaa calool istaagga.
Faa’iidooyin iyo Talooyin Muhiim u ah cunooyinka Ramadaanka
Xabbad keliya oo uu qofku cuno ayaana ku filan in heerka sonkorta dhiiggu uu noqdo mid xasiloon, isaga oo sida oo kalana yareeya kalastaroolka aan fiicnayn. Khudradda cagaaran iyo caleenta: Qofka waayeelka ah waa in aad loo siiyaa khudradda gaar ahaan noocyadeeda caleenta ah, oo ay dhakhaatiirtu caddeeyeen in ay ka hortag u noqon karto cudurka dila unugyada maskada ee Alzheimer ka.
Cilmibaadhis cusub oo natiijadeeda lagu faafiyey majaladda Annals of Neurology ayaa sheegtay in uu xidhiihd ka dhexeeyo hoos u dhaca khudradda cagaaran ee uu qofku cunayo, sida koostada iyo kaabashka iyo hoos u dhaca ku yimaadda awoodda garasho ee maskaxda qofku marka uu weynaado. Kalluunka: Kalluunka noocyadiisa ay ka mid yihiin Solomonka, Tuunaha iyo Sardiinigu waxa ay hodan ku yihiin asiidhka duxda leh ee Omega3 oo lagama maarmaan u ah caafimaadka wadnaha.
Waxaa iyaguna la mid ah dhinaca Omega cuntooyinka ay ka mid yihiin Faasuuliyaha, saliibka Qoondarka iyo saliidaha caafimaadka u fiican oo dhammaantood kalluunka beddel u noqon kara, dhinaca Omega3 marka laga hadlayo. Sida oo kale Beedku waxa uu ka mid yaha yilaha ugu muiimsan jidhku ka helo faytamiinnada, barootiinnada, asiidhada Folic iyo macdanaha kala duwan ee ay ka mid yihiin Selenium, Phosphorus iyo Calcium.
Bunka: Bunku qofka weyn la siiyo xilliga soonku waxa uu ak fogeynayaa xanuunka Alzheimer ka, xanuunnada wadnaha iyo habdhiska neefshida ku dhaca, faaligga iyo dhiigfuranka maskaxda iyo macaanka.
Waxaa xusid mudan in bunka badani aanu guud ahaan u fiicnayn caafimaadka, gaar ahaanan dadka waaweyn oo ay tahay in ay ka taxaddaraan. Caanaha: Caanaha iyo cuntooyinka laga soo dheegaa waxa ay ka mid yihiin cuntooyinka u fiican dheefshiidka ee sida gaarka ah muhiimka u ah xilliga soonka.
Waxaa ku badan barootiinta, waxa aana ku yar macaanka, sida oo kale waxa uu jidhku ka helaa Kalshiyaamta lagama maarmaanka u ah caafimaadka lafaha. Qofka weyn waxaa u fiican in uu inta soonka maalintii saddex jeer cabbo caano aan dufanku ku badnayn. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Cuntooyinka Ramadaan.. Qajaarka
Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email. Geeska Afrika Newspaper. Bogga Warar. Googooska Geeska.Waxaa qoray: Ibraahim Salah Email: ibra88 hotmail.
Waa bil uu Ilaah furo albaabada Jannada, uuna xiro albaabada Naarta. Waa bil uu Ilaah sw ugu magac daray irid ka mid ah albaabada Jannada, albaabkaasoo ay maalinta qiyaame ka soo geli doonaan dadka sooma. Waa bil abuura midnimo iyo iskaashi.
Haddaba, sidaa darteed asxaabtii Rasuulka scw ee sharafta badnaa waxay ahaayeen kuwii si xiiso iyo farxad ku jirto ugu qaabila bisha Ramadaanka. Ereyga Soon waa erey asal ahaan carabi ah, macnahiisuna waa hadal ka af-xirasho. Waxaana laga fahmi karaa oraahdii Alle swt uu ku lahaa Maryama Bintu Cimraan cs :. Soonku wuxuu u qaybsamaa labo qaybood, kuwaasoo kala ah mid faral waajib ah iyo mid Sunno ah.
Soonka waajibka ah ayaa wuxuu u sii qaybsamaa ilaa saddex qaybood, waxayna kala yihiin:. Lama soo koobi ujeedooyinka iyo xikmadda Soonka ka danbeysa; waxaana ka mid ah in Illaah amarkiisa loo hogaansamo. In dadka ay dareemaan gaajada iyo darxumada, si ay u xasuustaan khaaliqooda abuuray, sidoo kale inuu ugu naxariisto fuqurada. Ujeedooyinka Soonka waxaa ka mid ah, inuu Illaah dadka simo oo kan taliya iyo kan loo taliyo, maal qabeenka iyo kan saboolka ay si wadajir u dareemaan gaajada oo ay wada sooman yihiin.
Soonku wuxuu dhaliyaa midnimo iyo sinnaan, is jeceyl iyo is kaashi, sidoo kale waa cibaado laga doonayo qof kastoo ka mid ah muslimiinta, isagoo markaana buuxinaya shuruudda Soonka. Wuxuu kaloo Alle yiri:. Haddaba, halkan waxaan ka fahamnay in soonku yahay waajib aan dood ka taagnayn waajibnimadiisa, dhinaca kalena waxay culumada Islaamka isku waafaqsanyihiin in qofkii si ula-kac-ahaan u diida waajibnimada soonka uu gaaloobayo.
5 Tan Cunto Cun Ramadaanka (cuntada iyo Caafimaadka)
Soonku waxaa la waajibiyay maalin isniin ah, ayna tahay labada bisha Shacbaan sannadkii 2aad ee hijriga. Soonku, wuxuu leeyahay shuruudo, oo haddii aanan lala imaanin uu burayo soonku, waxaana ka mid ah:. Sidoo kale waxaa qabytan soo hoos galaya qofka xanuunsan ee aan rajada laga qabin inuu bogsado. Waxaa kaloo ku jira hooyada uurka leh iyo tan ilmaha nuujinaysa, waa haddii ay ula baqdo nafteeda iyo tan cunuga inay quudaantaasi la timaaddo oo ay afurto.
Qaybta labaad oo ah kuwa loo baneeyay inay afuraan, isla markaana markii ay awood u helaanna soonkii soo gudaan oo qalleeyaan, waxaa ka mid ah qofka xanuunsan ee rajeynaya inuu bogsoodo, qofka safarka ku jiro ee aan deganayn.
Illaah kor ahaayee wuxuu yiri:. Qaybta ugu danbeysa ee ay waajib ku tahay inay afuraan, isla markaana ay soonka dib u gudaan waa:- Haweeney inta ay ku jirta wakhtiga caadada iyo kan dhalmada, waa Xaaraan in ay xilligaas soonto, waxaana laga doonayaa in ay soonto marka ay daahirto.
Soonku wuxuu leeyahay labo tiirar oo asaas u ah Soonka, kuwaasoo loo baahan yahay inuu qofka soomani la yimaado, waxayna kala yihiin Tiirka labaad waa niyadda, camal kastana waxaa shardi u ah niyad ikhlaas oo lama aqbalayo camalka hadduusan niyad wadan.
Who gmp injectable company
52v 1500w ebike
thoughts on “Cunooyinka u fiican ramadaanka”